PressReader - Ilanga langeSonto: 2019-01-06 - Luyabuya ezikoleni olwemisubelo
Luyabuya ezikoleni olwemisubelo
Ungqongqoshe uthi lusizile emiphumeleni ka-matric
LUKHUZA ibuya uhlelo lokusatshalaliswa kwemisubelo ezikoleni KwaZulu-natal. Lokhu kumenyezelwe ngungqongqoshe wezemfundo kulesi sifundazwe, umnu Mthandeni Dlungwana, ngolwesihlanu emcimbini obusenkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), ethekwini, wokuklonyeliswa kwabafundi abaphase kahle umatikuletsheni.
Ungqongqoshe uthe okwenza baqhubeke nalolu hlelo wukuthi luwusizo kakhulu kubafundi abahlwempu, abangenawo amandla okuyithenga imisubelo, abagcina belova esikoleni bandise isibalo sabafeyilayo.
Uthi bakholwa wukuthi lusize kakhulu ekunyukeni kwemiphumela. Uthe lolu hlelo lwabelwe imali engaphezulu kuka-r27 million esifundazweni.
“Abantu abaningi bebethi kungani sithenga imisubelo ngoba akuwona umsebenzi esibekelwe wona emnyangweni. Lolu hlelo luhle kakhulu, sizoqhubeka nalo. Okuhle kakhulu wukuthi ungqongqoshe kuzwelonke (unkk Angie Motshekga) ulwamukelile,” kusho umnu Dlungwana.
Kuzokhumbuleka ukuthi umnyango ugcine ulumisa lolu hlelo ngenxa yengcindezi oyifakelwe yinational Teachers Union (Natu) ebikade isola inkohlakalo ezikhulwini zomnyango njengoba ngesikhathi luqalwa lwalubekelwe imali elinganiselwa ku-r20 million kodwa yagcina ifinyelela ku-r109 million.
Uziphendulela umnyango kulokho wathi lwaluqale luzohlinzeka abafundi abambalwa kodwa kwagcina sekubonakala ukuthi baningi kakhulu abaphumela obala abafuna ukulekelelwa. Okwakukhalisa le nyunyana wukuthi ezikoleni akusekho ngisho indawo yokuhlala othisha neyokufundisela, imisubelo igcwele ngokweqile emagumbini ezikoleni.
Ephawula ngalokhu ngolwesihlanu umengameli wenatu, umnu Allen Thompson, uthe abaphikisani nokusizwa kwabafundi ngalolu hlelo kodwa abalwisana nakho ukungahambiswa ngendlela kwezinto ngalo. Uthi bazolulandela lolu hlelo, babheke nokukhishwa kwethenda yalo nokulandelwa kwayo yonke imigomo. Uveze ukuthi bazobheka ngisho kwabakwasouth African Bureau of Standards (SABS) ukuthi iphasisiwe yini le misubelo njengoba kulena eyayigcwaliswe ezikoleni yayingenayo imininingwane ecacisa nokuthi yakhiwe kuphi.
“Sizoqhubeka nokufaka ingcindezi kungqongqoshe kuzwelonke, sifuna imiphumelo yophenyo olunzulu ayethembise ukulwenza. Ukusatshalaliswa kwemisubelo ngokweqile nyakenye sasithe akuphenywe ngoba nokunikezwa kwezingane ezincane ezifunda ugrade-r kuyasidida ukuthi kufundiswani kuzona.
Kunezikole ezingaphansi kuka- section 21 ezingayitholile namanje imali yezinsiza kusebenza okuyikhona umnyango engabe ubhekana nakho ngqo,” kusho umnu Thompson.
INHLOKO yomnyango wezemfundo Kwazulu-natal, udkt Enoch Nzama, undunankulu obambile, umnu Sihle Zikalala, nongqongqoshe wezemfundo esifundazweni, umnu Mthandeni Dlungwana, beklomelisa umfundi wasezama High ophase ngamalengiso, ubongumenzi Ndlovu.